China Anti SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (TRFIA Edition) orinasa sy mpanamboatra | Binic
TRFIA sw Famonoana orona sy orofary ge
SHANGHAI Binicare Co., LTD dia miasa amin'ny vokatra vitro diagnostic (IVD) Coronavirus, izay misy ny test antigen haingana sy ny kitapo fitiliana antibody. Ny orinasa misy anay dia ao Qingdao, ary ny departemantan'ny varotra any amin'ny foibe dia any Shanghai. Izahay dia solontenan'ny Qingdao AIBO Diagnostic Co., LTD manerantany. Ny Kitapo Fitsapana haingana an'ny Anti SARS-CoV-2 Antigen Rapid test (TRFIA) dia mampiasa teknolojia Time Resolved Fluorescence Immunochromatographic Assays (TRFIA) mba hahitana ny proteinina nucleosapsid virus SARS-CoV-2, izay proteinina lehibe ilaina amin'ny SARS-CoV-2 ao santionan'ny nasal / oropharyngeal olombelona. Ny fikarohana ny antigène proteinina nukokrapsid SARS-CoV-2 dia azo ampiasaina hanampiana ny famaritana ny aretin'ny virus coronavirus vaovao, ary manampy amin'ny fanandramana aloha ny aretin'ny pnemonia coronavirus vaovao ao anatin'ny vanim-potoana miafina.
Fitsipiky ny fitsapana
SARS-CoV-2Antigen Rapid Test Kit (TRFIA) dia famonoana sandwich immunofluorescent. Ny fikarohana ny antigine proteinina nucleocapsid SARS-CoV-2 dia azo ampiasaina hanampiana ny famaritana ny aretina virus corona vaovao, ary manampy amin'ny fitiliana vao haingana ny tantara virus corona virus pneumonia in the latent period. Ny test test dia misy fonosana izay voahosotra miaraka amin'ny anti-CoV N proteinina monoclonal proteinina eo amin'ny tsipika fitsapana. Rehefa ampiharina amin'ireo lava-drano santionany ilay santionany, dia miforona ny proteinina SARS-CoV N sy ireo kompleksin'ny antibody misy marika ary mamakivaky ilay tsipika. Ny reagent mikaroka momba ny fluorescent microsfera dia ampiasaina mba hamoronana tsipika mena hita miaraka amin'ny jiro UV mifangaro. Ny fisian'ny SARS-CoV-2 dia haseho amin'ny tsipika fizahana mena (T) hita eo amin'ny varavarankely valin'ny valiny. Ny membrane dia mifono miaraka amin'ny Chicken IgY amin'ny tsipika fifehezana (C). Ny tsipika fanaraha-maso (C) dia mipoitra isaky ny valin'ny valim-panadinana rehefa misy santionany mivezivezy amin'ny tsipika. Ny Control Line dia ampiasaina ho toy ny fanaraha-maso ny fomba fiasa. Ny tsipika fanaraha-maso dia tokony hiseho foana rehefa ny fomba fizahana dia tanterahina tsara ary ny reagents dia miasa araka ny niniana. Ny fitsapana antigen haingana dia fitaovana fitiliana diagnostika, saingy tsy natao hanamafisana ny areti-miasa mahery vaika na hisorohana ny fifindran'ny olona tsy manana soritr'aretina. Natao ho an'ireo olona manana soritr'aretin'ny COVID-19, olona izay mifanerasera akaiky amin'ny tranga COVID voamarina izy ireo, ary ho an'ny fanarahana ireo olona anisan'ny valanaretina.
Ho an'ny mpandalina TRFIA-Fandikana ny valiny. Vinavinaina ho azy ny valiny ary aseho eo amin'ny efijery. Ny valin'ny santionany dia haseho amin'ny sanda famantarana sy ny marika "ratsy", "tsara" na "ERROR".
Famaritana ny valiny:
tsy misy Fonosana fonosana ravin Karatra IC (Tsy voatery) Orona / orofary
Swab (tsy voatery) fitrandrahana
Tube Tavoahangy réagentin'ny fitrandrahana
1 1 fitsapana / boaty 1 1 1 1 1
2 Fitsapana / boaty 5 5 1 5 5 5
3 Fitsapana / boaty 25 25 1 25 25 25
4 Fitsapana / boaty 50 50 1 50 50 50
Teo aloha: Kitapo fitsapana haingana an'ny Anti SARS-CoV-2 Antigen (fanontana colloidal)
Manaraka: Saron-tava tsy fitsaboana 3ply azo ampiasaina ho an'ny fampiasana sivily
Kitapo fitsapana haingana an'ny Antigen Swab
Kitapo fitsapana haingana an'ny Covid Antigen
Kitapo fitsapana antigen haingana
Dingana iray hCG fitsapana fiterahana (kasety)
Dingana iray amin'ny fitsapana fiterahana HCG (Midstream)
Kitapo fitsapana haingana an'ny Anti SARS-CoV-2 Antigen (Colloid ...
Dingana iray amin'ny fitsapana fiterahana HCG (Strip)